ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: ပျော်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ How do stay with Happy?
ပျော်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ How do stay with Happy?
မင်္ဂလာပါ သူငယ်ချင်းတို့ရေ … ပို့စ်တွေမရေးတာလည်း အတော်ကြာသွားပြီအကြောင်းကြောင်းလေးတွေကြောင့် …… နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိတယ်.. ဒီကနေ့ကစပြီး တဒေါင့်တနေရာကနေ ဆင်တဲကဖေးအတွက် ဥာဏ်အားရှိနေသ၍ ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ဆန္ဒပြုရင်း ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ ……ဘ၀မှာ ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ ပျော်အောင် နေထိုင်ရမလဲ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးနဲ့ ပြန်လည် စတင်မိတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်……
၁။ ငါကိုယ်ငါ လေးစားမှု့ ရှိနေသေးသ၍ သူများဘယ်လိုထင်တယ်ဆိုတာကိုကြောင့်ကြ စိုးရိမ်နေဖို့မလိုဘူး ။
၂။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်မသေးတဲ့သူဟာ သူများကိုယ့်ကို အထင်သေးတာကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်နေတဲ့သူဟာ သူများဘာပြောပြော ခံနိုင်တယ်။
၃။ သူများကို ဘယ်လိုလူစားလဲလို့ ပြောတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုလူစားလဲလို့ ဖော်ပြနေတာနဲ့တူတယ်။
၄။ တကယ် ကြီးကျယ်တဲ့ ၊ ထိရောက်တဲ့ ၊ ကိုယ့်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု အများဆုံးရတဲ့အလုပ် ၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေလည်းအများဆုံး ထုပ်ပြီးသုံးရတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်မယ့်သူဟာ အသေးအမွှား အဆိုးတွေကို တွေးဖို့မသင့်ဘူး ။
၅။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ချမ်းသာအောင် မနေနိုင်တဲ့သူဟာ သူများကို စိတ်ချမ်းသာအောင် အထောက်အကူ မပေးနိုင်ဘူး။
၆။ စိတ်ဓာတ်ကျသွားရင် စိတ်အိုသွားတယ်။
၇။ သတိနဲ့ နေတဲ့စိတ်ဟာ ဘယ်တော့မှ မအိုဘူး။
၈။ ငွေကလွဲလို့ တခြားဘာမှ မရတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တာဟာ ဘ၀ကိုရောင်းစားတာ နဲ့တူတယ်။
၉။ ကိုယ့်အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံး စိတ်ထားနဲ့အရည်အချင်းကို ဖော်ပြနိုင်ရမယ်။
၁၀။ ကိုယ့်အခက်အခဲ ကိုယ့်ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းရှာတဲ့အခါမှာ အများအတွက် အဆင်ပြေဖို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှသာ ရေရှည်ပြေလည်တဲ့ အဖြေကိုရမယ်။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 6:36 AM